အသုံးပြုစဉ်နှင့်ထုတ်ယူစဉ် VTA တက်ကြွမှု - VTA (၂၀၁၄) တွင်တွေ့ရသော CRF အာရုံခံ - Brain On Porn
အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာစဉ်ကတက်ကြွစွာ VTA: VTA အတွင်းတွေ့ရှိခဲ့ CRF အာရုံခံ (2014)
ယခုအချိန်အထိ ဦး နှောက်အတွင်းရှိသီးခြားစနစ်နှစ်ခုမှမူးယစ်ဆေးစွဲမှုသည်ရလဒ်ဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည်။ လူတစ် ဦး သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသောအခါအသက်သွင်းခြင်းနှင့်ထုတ်ယူခြင်းမှထွက်ပေါ်လာသည့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်။ သို့သော်လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုအရ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်တွင်နီကိုတင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ထုတ်ယူခြင်းနှစ်မျိုးလုံးတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်သောတိကျသောအာရုံခံဆဲလ်များရှိသည်ဟုဖော်ပြသည်။
Olivier ဂျော့ခ်ျ, San Diego မှ,, CA အတွက် Scripps သုတေသနဌာန (TSRI) မှာလက်ထောက်ပါမောက္ခဦးဆောင်သောသုတေသီများ, သူတို့ကဤတူညီသောအာရုံခံသည်အခြားစွဲလမ်းတ္ထုများတုန့်ပြန်တက်ကြွဖြစ်နိုင်သည်ထင်ဟုဆိုသည်။ သူတို့ရဲ့လေ့လာမှုဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပါတယ် သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ.
ဂျော့ခ်ျကဤသို့ရှင်းပြသည် -“ လူသားတွေရဲ့အာရုံခံဆဲလ်တွေကိုလူသားတွေဆီကိုရောက်အောင်ကျွန်ုပ်တို့နည်းလမ်းရှာနိုင်မယ်ဆိုရင်မူးယစ်ဆေးဝါးထုတ်လွှတ်တဲ့အမြင့်ကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာတွေကိုလျှော့ချနိုင်တယ်။ ”
သူဟာသူတို့ရဲ့လေ့လာမှုတွင် neuron ပစ်မှတ်ထားမှမူးယစ်ဆေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတသို့မဟုတ်မျိုးရိုးဗီဇကုထုံး၏ဖန်တီးမှုကူညီကြလိမ့်မည်မျှော်လင့်လို့ပြောပါတယ်။
သုတေသီများကရှင်းပြသည်မှာယခင်ကအာရုံခံဆဲလ်များကိုတွေ့ရှိသည့် ဦး နှောက်၏venရိယာဖြစ်သောဗိုင်းရပ်စ် tegmental (ရိယာ (VTA) သည်ထုတ်ယူခြင်းနှင့်မဟုတ်ဘဲဆုလာဘ်စနစ်နှင့်သာသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းပြသည် စိတ်ဖိစီးမှု။ ဤ VTA အာရုံခံအပျော်အပါးဆက်စပ်တဲ့ neurotransmitter ဖြစ်သော dopamine, ထုတ်လုပ်ရန်သိရခံခဲ့ရသည်။
ဂျော့ခ်ျတိုရွန်တိုတက္ကသိုလ်မှာဝန်ထမ်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသောအခါသို့သော်5လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း, သူတို့ VTA အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု peptide ရှာဖွေတွေ့ရှိ။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု peptide နှင့်ဆက်နွယ်သော corticotropin-releasing အချက် (CRF), ဟုခေါ်သည် စိုးရိမ်ခြင်း နှင့် စိတ်ကျရောဂါ.
စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုထက်ပိုသောအဆအပြေးပြီးနောက်အသင်းတူညီတဲ့ရလဒ်နှင့်အတူတက် လာ. ။
ဆုတ်ခွာစဉ်က activated အဆိုပါ VTA အတွက် CRF ထုတ်လုပ်အာရုံခံ
ဤအအံ့သြစရာရလဒ်များကိုပြီးနောက်ဂျော့ခ်ျနှင့်, La Jolla, CA အတွက် Salk Institute မှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ, ကြွက်ဦးနှောက်နမူနာအတွက် CRF စောငျ့ရှောကျဖို့ရေဒီယိုသတ္တိကြွ RNA အမှတ်အသားများကို အသုံးပြု. ယင်း VTA မှာပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကြ၏။
သာမန်, တနေ့ထဲကဘာမှမတှေ့ပွီးနောကျ, အဖွဲ့က X-Ray ရုပ်ရှင်အပေါ်အလွန်သေးငယ်သောအနက်ရောင်အစက်ကိုမြင်သောအခါ, ဤ VTA မှာတွေ့ရတဲ့ CRF ထုတ်လုပ်အာရုံခံခဲ့ကြသည်။
ဂျော့ခ်ျဒီလိုပြောတယ် -“ သင်ဖတ်စာအုပ်ဖတ်ကြည့်လိုက်ရင်အဲဒီအာရုံခံဆဲလ်တွေဟာ VTA မှာမရှိဘူး။ အဲ့ဒါကကျွန်တော့်ဘဝရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးနေ့ပါပဲ။ ”
ထို့နောက်အသင်းကနီကိုတင်းတွင်ဤအာရုံခံ play အခန်းကဏ္ဍကိုကြည့်ရှု စှဲမွဲမှု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့ကြွက်နှင့်ကြွက်များ၏ဦးနှောက်နမူနာလေ့လာခွငျးအားဖွငျ့ နီကိုတင်းစွဲ စီးကရက်နှစ်ခုထုပ်တဲ့နေ့ကသောက်သူတစ်ဦးကလူ့ညီမျှ။
ရလဒ်များ VTA အတွက် CRF ထုတ်လုပ်အာရုံခံဆုတ်ခွာစဉ်က activated ခဲ့ထင်ရှားနှင့်လူသားမြားသညျကနေဦးနှောက်ကိုနမူနာဆန်းစစ်ပေါ်၌အဖွဲ့ကဤတူညီသော VTA အာရုံခံပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ယခင်လေ့လာမှုများကြွက်နှင့်လူသားထဲကနေပြန်ရောက်သွားတယ်ကြသူပြခဲ့ကြ ဆေးလိပ်ဖြတ် မကြာခဏပထမဦးဆုံးကထိတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ထက်ပိုပြီးနီကိုတင်းကိုစားသုံးကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, သုတေသီများ VTA အတွက် CRF ထုတ်လုပ်မှုဆုတ်ခွာစဉ်အတွင်း CRF ထုတ်လုပ်မှုလျော့ကျဖို့အာရုံခံအတွက်မျိုးဗီဇကိုပစ်မှတ်ထားဖွငျ့ဤအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ရှိမရှိစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
ဒီစမ်းသပ်မှုကနေရလဒ်များ VTA အတွက်လျော့နည်း CRF နှင့်အတူကြွက်ပစ္စည်းဥစ္စာမှဝင်ရောက်ခွင့်တစ်နောက်ဆက်တွဲသင်တန်းကာလအတွင်း၎င်းတို့၏နီကိုတင်းစားသုံးမှုတိုးမြှင့်မပြုခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်အပေါ်မှတ်ချက်ပေး, ဂျော့ခ်ျ says:
"ဒါကတစ်ခုလုံးကိုအယူအဆရေးရာမူဘောင်ပြောင်းလဲစေပါသည်။ ငါတို့အားလုံးပြန်ကြည့်ရမယ်၊ မင်းကအဲဒီအာရုံခံဆဲလ်တွေကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အခါမှာမင်းမှာဒီ Euphoria ခံစားမှုမြင့်မားတယ်။ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာဒီစိတ်ဖိစီးမှု peptide ကို activate လုပ်တဲ့အခါမှာမင်းကအဲဒီအာရုံခံဆဲလ်တွေကို activate လုပ်တဲ့အချိန်မှာမင်းရဲ့ဆုလာဘ် system ကို activated လုပ်ထားတာဖြစ်နိုင်တယ်။
သူကယခုသူတို့ဆုလာဘ်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစနစ်များအကြားဆက်သွယ်မှုကိုတွေ့ပြီယခုသူနှစ် ဦး စလုံးစနစ်များတ ဦး တည်း "စိတ်ခွန်အားနိုးမှုစနစ်," အဖြစ်သူစဉ်းစားသူ dopamine မြင့်မားတဲ့လူတစ် ဦး ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ဆက်လက်မောင်းနှင်နေစဉ်ရုပ်သိမ်းခြင်း၏စိတ်ဖိစီးမှုသူတို့ကိုအားပေးတယ်သူကထပ်ပြောသည် ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတင်းယနေ့တွင် မကြာသေးမီကအကြံပြုကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုကဖော်ပြ ဆေးပြင်းလိပ်ဆေးလိပ်စီးကရက်ဆေးလိပ်ကဲ့သို့ပင်အန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည်.